Awukwazi phikisana ukuthi, okukuhle ukuhlala bar noma nanoma iyiphi enye inhlangano ukuze ingilazi ezinhle cocktail, noma kungaba i ubisi abavamile noma utshwala. Into esemqoka ukuthi kwaba zizwakale kahle futhi kahle ehlotshisiwe, uma kungenjalo awunakuthokoza kusukela ukuvakashelwa oluyosala i aftertaste kabi isivakashi ngempela isatshalaliswa abangane ngokuqinisekile ukuthi sizothinta idumela kulesi sikhungo. Nokho yini noma cha ukunikeza imali eyanele cocktail ehloniphekile nge Bacardi, Baileys, whiskey nezinye iziphuzo, uma kungenziwa kuphekwe ekhaya. Lokhu kuwusizo hhayi kuphela emnothweni, kodwa futhi ngaso sonke isikhathi ibe isikhungo ukunakwa ngasiphi party.
Izingxenye ethandwa kakhulu kakade okukhulunywa Bacardi, Baileys, whiskey nabanye. Bacardi cocktail kungaba okuhluke kakhulu futhi ukunambitheka kanye nokulungiselela eyinkimbinkimbi. Lesi sihloko sizosibonisa ezinye izibonelo cocktail ezahlukene, okuyinto ingalungiswa ngesisekelo Bacardi. Kusukela ngaleso sikhathi, ngaphezu version zasendulo zaziziningi izinhlobo ezahlukene cocktail esekelwe le noveli yodumo.
Siyazi emlandweni ukuthi Bacardi cocktail aqalwa wadala Bacardi umndeni-Cuban. Bona kungadalwa kuphela ngesisekelo rum ekhiqizwa kusezweni-Cuban okungewakho umndeni ngoba zezizukulwane eziyisikhombisa.
Cocktails of rum Bacardi kukhona iresiphi silula ukupheka «Bacardi Cola». Ngakho emangalisayo ukunambitha cocktail kuzodinga izithako ezimbili kuphela: rum Bacardi Uphakeme kanye Coca-Cola. Glass ligcwaliswe ice amaqhafuqhafu sichotshozwe 2/3, it is batheleka 40 ml utshwala kanye asele kweze ligcwele Cola. Ukuze ahlobise isiphuzo umbala okubandayo itiye elimnyama nocezu lukalamula uya kahle, njengoba Imfanelo ezibalulekile cocktail uzobe ezinemibala tube futhi isambulela.
Enye ukumela inombolo cocktail. Ngalesi sikhathi, inani izingxenye likhulu:
rum Bacardi- 30ml, Abashiya Amakhaya - 20ml, iyiphi Energy - 100ml laseGranada isiraphu 20 ml kanye kalamula. Iziphuzo ezinjalo Bakardi okulungiselelwe usebenzisa izibuko, izibuko futhi Saucers.
Ezansi le esosweni wathela Grenadines kalamula (10 ml ngokwanele), futhi phakathi nendawo ucezu ukusabalala elicwengisiswe ukuba ngiphuze imnandi. Endaweni ehlukile, ibe ingilazi wathela Absinthe isethi lase ngesineke kakhulu sashukunyiswa Ukujikeleza, phakathi kwesikhathi lapho ingxenye yesithathu ingxube elachithwa zibe ushukela. Ukuze ushukela effektnosti luvutha ngemva kokulinda imizuzwana emihlanu futhi batheleka Saucer ngoshukela izinsalela ingxube ka ingilazi. Sheshisa, wamboza nabokhulumile ushukela ingilazi. Ngenxa yalokho, lapho umlilo uyafa ngaphandle, uketshezi igcwalisa ingaphakathi ingilazi. Kuleli qophelo, ingilazi icindezelwa ngokuqinile esosweni kanye nabokhulumile. Cocktails utshwala Bacardi babhekwa ugunyazwe ngemva sibhebhezela ingxube utshwala kanye nesigaxa spoon ekhethekile isipikili Energy.
Cocktails ongumRom Bakardi e okufana yayo classical ibhalwe kusukela Roma esifanayo, kalamula futhi emhlophe laseGranada. Isetshenziswa wayithola ngendlela shaker okuyinto wabekwa icala isipuni laseGranada kalamula isibambo komunye uhhafu isithelo salowo muthi, futhi 36 ml rum. Akumelwe sikhohlwe iqhwa isidingo endaweni shaker. Ngemva ukuxuba, isiphuzo elicwengekileyo ngokusebenzisa strainer ekhethekile ku ingilazi cocktail, okuyinto lihlotshiswe nocezu lukalamula. Ukuze ube zakudala "Bacardi ekhethekile", udinga ukufaka ngendlela shaker nge 25 ml i-gin.
Ngokusobala, Iziphuzo kanye rum Bacardi uzilungiselele ngokushesha kakhulu khona zonke izithako. Indlela Yokuphila Isikhathi cocktail zakudala yaziwa iminyaka eminingi, ngakho wonke umuntu kufanele azame ukunambitheka isiphuzo lasendulo, ukujabulela abakhileyo fabulous Cuba. Hhayi ngaphandle isizathu ngesikhathi Bacardi umndeni ukuvikela ilungelo babo siqu Bacardi cocktail, olwahlelwa kuphela kagologo ekhiqizwa lapha kusukela 1862.
Amabhuku ahamba phambili Ayzeka Azimova. Evela ERussia ngemikhonzo
Vyatka kwezazi Museum: incazelo, ikheli kanye nomsebenzi isheduli
Silungiselela ukwehlukana impahla somshado
Kusukela lokho kungaba isilungulela kanjani ukulwa naso?
Psychology kwabesifazane: isiko kanye nemvelo
"Scream 2": nabalingisi, ngesakhiwo, indaba yokudalwa kwendawo yokukhulekelwa kukankulunkulukazi intsha horror
Amasiko Starter ngoba iyogathi ekhaya. Indlela ukupheka yogurt okuzenzela